ဖုန်းရေစို တဲ့ အခါတိုင်း ဆန်အိုးထဲ ထည့်လိုက်တဲ့ နည်းလမ်းက မှန်ကန်ရဲ့လား … ? – Na Pann San
Na Pann | April 5, 2020 | Knowledge | No Comments
လူ တော်တော် များများ ကတော့ ဖုန်း ရေစိုပြီ ဆိုရင် ဆန်စေ့တွေ ထဲကို ထည့်လိုက် ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့တော့ ရေစိုတဲ့ဖုန်း အမြန်ခြောက်အောင် ဆန်စေ့က အစိုဓာတ်တွေကို နှုတ်ယူ သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန်စေ့က ဖုန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းက ရေအစိုဓာတ်ကို တကယ် နှုတ်ယူတာ မယူတာ အပထား၊ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဖုန်းရေစိုတဲ့ အခါ သူ့မှာပါတဲ့ ဘက်ထရီရဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့စနစ် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ဖုန်းတွေ လောင်ကျွမ်း ပေါက်ကွဲတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ပါဘဲ။ တချို့ကတော့ ဖုန်းရေစိုပြီဆိုရင် ပေါင်မုန့်ကင်စက်ထဲကို ထည့်တာမျိုးတွေ၊ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်နဲ့ မှုတ်တာမျိုးတွေ လုပ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါဟာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ဆန်ထဲကိုထည့်တာ မှန်လား/မှားလား …?
ဖုန်းရေစိုတဲ့ အခါ ဆန်ထဲ၊ တချို့က ချက်ပြီးသား ထမင်းထဲကိုတောင် နှစ်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆန်ဟာ သို့မဟုတ် ထမင်းဟာ ရေအစိုဓာတ်ကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်ခြင်းမှာ သက်ရောက်မှု အလွန်နည်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်းအတွက်းပိုင်းက အစိုဓာတ်ကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
နောက်ထပ် ဆိုးကျိူုးကတော့ တစ်ခြားအမှုန်အမွှားတွေ လည်း ဖုန်းရဲ့ အပေါက်ကလေးတွေက တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အတွက် ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါ ဆန်ထဲကို ထည့်ခြင်းစတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ လုံးဝမမှန်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ဖုန်းအတွင်းကို ဆန်စေ့တွေ ညပ်နေတာ၊ ဝင်နေတာမျိုးတွေကိုပါ ခံရနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းရေစိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ …?
ဒီတော့ ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းနဲ့ အမြန်ဆုံး ဖုန်းကိုလည်း ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ နောက် ခြောက်သွေ့တဲ့ တဘက်တစ်ထည်နဲ့ အရင်သုတ်ပါ။ ပြီးရင် ဖြုတ်လို့ရတာမှန်သမျှ တစ်စစီ ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘက်ထရီကိုတောင် ဖြုတ်လို့ရရင် ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်၊ မန်မိုရီကတ် စတာတွေကိုလည်း ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ယင်းနောက် Zip-lock အိတ်ထဲကို ဖုန်းကိုထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆီလီကာအခဲလေးတွေ လက်တစ်ဆုပ်စာကိုလည်း အဲဒီထဲကို ထည့်ပြီးပိတ်လိုက်ပါ။ ဆီလီကာအခဲလေးတွေဆိုတာ ဆေးတွေ၊ ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့ တစ်ခြားကုန်ပစ္စည်းတွေထဲကို အထုပ်ငယ်လေးတွေ ပုံစံနဲ့ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို အမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်ပေးပြီး၊ ဆန်ထက် ပိုထိရောက်တဲ့ နည်းပါ။ (၇၂)နာရီလောက် ဒီအတိုင်း ပစ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဖုန်း ဂရမ်တီကို ထိခိုက်စေနိုင်မလား …?
တချိုက အထက်ပါနည်းကို အသုံးပြုလိုက်ရင် ဖုန်းဂရမ်တီကို ထိခိုက်နိုင်မလားဆိုပြီး မေးကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အာမခံလို့ မရပါဘူး။ အရေးနဲ့အကြောင်းဆိုတော့ Seal တွေ ဘာတွေ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သေချာတာတစ်ခုက ရေစိုပြီး ပျက်စီးတဲ့ဖုန်းတွေ၊ မိမိပယောဂကြောင့် လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့် ပျက်စီးတဲ့ဖုန်းတွေဟာ အလိုလို ဂရမ်တီ ကျိုးပေါက်ပြီးသားလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ရေစိုထားတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ အခု သုံးလို့ ရနေရင်တောင် နောက်ထပ် လတော်တော်ကြာတဲ့အခါ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ iPhone တွေဟာ Waterproof ဆိုတဲ့ ရေစိမ်ခံနည်းပညာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ iPhone7ကနေ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေဟာ ရေအနက် (၃)မီတာအောက်မှာ မိနစ်(၃၀)အထိ ရေစိမ်ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့က ရေစိမ်ခံမခံကို အလောင်းအစား လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က အလောင်းအစား လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ရေစိမ်ခံတယ်ဆိုတာ စံသတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်ပြီး၊ ဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ ရည်ညွှန်းချက် မဟုတ်ပါ။
Water-resistance ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေအနက်ထက် ပိုတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေရဲ့အပူချိန် ခြားနားတဲ့အခါ၊ ရေရဲ့ဖိအားက ကြီးမားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ water-resistance.ကို လျှော့ကျစေနိုင်တာကိုလည်း သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ Credit
လူ တျောတျော မြားမြား ကတော့ ဖုနျး ရစေိုပွီ ဆိုရငျ ဆနျစတှေ့ေ ထဲကို ထညျ့လိုကျ ကွပါတယျ။ တဈခြို့ကလညျး သူမြားလုပျလို့ လိုကျလုပျတာလို့ ဆိုပါတယျ။ တဈခြို့တော့ ရစေိုတဲ့ဖုနျး အမွနျခွောကျအောငျ ဆနျစကေ့ အစိုဓာတျတှကေို နှုတျယူ သှားနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆနျစကေ့ ဖုနျးရဲ့အတှငျးပိုငျးက ရအေစိုဓာတျကို တကယျ နှုတျယူတာ မယူတာ အပထား၊ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့ နညျးလမျးလေးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ဖုနျးရစေိုတဲ့ အခါ သူ့မှာပါတဲ့ ဘကျထရီရဲ့ လညျပတျနတေဲ့စနဈ ကမောကျကမဖွဈပွီး ဖုနျးတှေ လောငျကြှမျး ပေါကျကှဲတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ ပါဘဲ။ တခြို့ကတော့ ဖုနျးရစေိုပွီဆိုရငျ ပေါငျမုနျ့ကငျစကျထဲကို ထညျ့တာမြိုးတှေ၊ ဆံပငျအခွောကျခံစကျနဲ့ မှုတျတာမြိုးတှေ လုပျကွပါသေးတယျ။ ဒါဟာ အလှနျအန်တရာယျမြားတဲ့ နညျးလမျးဖွဈကွောငျး ပွောခငျြပါတယျ။
ဆနျထဲကိုထညျ့တာ မှနျလား/မှားလား …?
ဖုနျးရစေိုတဲ့ အခါ ဆနျထဲ၊ တခြို့က ခကျြပွီးသား ထမငျးထဲကိုတောငျ နှဈလရှေိ့ပါတယျ။ တကယျတော့ ဆနျဟာ သို့မဟုတျ ထမငျးဟာ ရအေစိုဓာတျကို ပကျြပွယျစနေိုငျခွငျးမှာ သကျရောကျမှု အလှနျနညျးပါတယျ။ နောကျပွီး ဖုနျးအတှကျးပိုငျးက အစိုဓာတျကို ဖြောကျဖကျြဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
နောကျထပျ ဆိုးကြိူုးကတော့ တဈခွားအမှုနျအမှားတှေ လညျး ဖုနျးရဲ့ အပေါကျကလေးတှကေ တဈဆငျ့ ဝငျရောကျနိုငျသညျ့အတှကျ ဖုနျးရစေိုတဲ့အခါ ဆနျထဲကို ထညျ့ခွငျးစတဲ့ နညျးလမျးတှဟော လုံးဝမမှနျဘူးလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ တဈခါတလမှော ဖုနျးအတှငျးကို ဆနျစတှေ့ေ ညပျနတော၊ ဝငျနတောမြိုးတှကေိုပါ ခံရနိုငျပါတယျ။
ဖုနျးရစေိုရငျ ဘာလုပျရမလဲ …?
ဒီတော့ ဖုနျးရစေိုတဲ့အခါ ဖွဈနိုငျသမြှနညျးနဲ့ အမွနျဆုံး ဖုနျးကိုလညျး ပါဝါပိတျလိုကျပါ။ နောကျ ခွောကျသှတေဲ့ တဘကျတဈထညျနဲ့ အရငျသုတျပါ။ ပွီးရငျ ဖွုတျလို့ရတာမှနျသမြှ တဈစစီ ဖွုတျလိုကျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဘကျထရီကိုတောငျ ဖွုတျလို့ရရငျ ဖွုတျလိုကျပါ။ ဖုနျးဆငျးမျကတျ၊ မနျမိုရီကတျ စတာတှကေိုလညျး ဖွုတျလိုကျပါ။
ယငျးနောကျ Zip-lock အိတျထဲကို ဖုနျးကိုထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ ဆီလီကာအခဲလေးတှေ လကျတဈဆုပျစာကိုလညျး အဲဒီထဲကို ထညျ့ပွီးပိတျလိုကျပါ။ ဆီလီကာအခဲလေးတှဆေိုတာ ဆေးတှေ၊ ဆေးပစ်စညျးတှနေဲ့ တဈခွားကုနျပစ်စညျးတှထေဲကို အထုပျငယျလေးတှေ ပုံစံနဲ့ပါဝငျတတျပါတယျ။ အစိုဓာတျကို အမွနျဆုံးထိနျးခြုပျပေးပွီး၊ ဆနျထကျ ပိုထိရောကျတဲ့ နညျးပါ။ (၇၂)နာရီလောကျ ဒီအတိုငျး ပဈထားဖို့ လိုပါတယျ။
ဖုနျး ဂရမျတီကို ထိခိုကျစနေိုငျမလား …?
တခြိုက အထကျပါနညျးကို အသုံးပွုလိုကျရငျ ဖုနျးဂရမျတီကို ထိခိုကျနိုငျမလားဆိုပွီး မေးကွပါတယျ။ ဒါကတော့ အာမခံလို့ မရပါဘူး။ အရေးနဲ့အကွောငျးဆိုတော့ Seal တှေ ဘာတှေ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး သခြောတာတဈခုက ရစေိုပွီး ပကျြစီးတဲ့ဖုနျးတှေ၊ မိမိပယောဂကွောငျ့ လြှပျစဈဝါယာရှော့ကွောငျ့ ပကျြစီးတဲ့ဖုနျးတှဟော အလိုလို ဂရမျတီ ကြိုးပေါကျပွီးသားလို့ ဆိုပါတယျ။ နောကျပွီး ရစေိုထားတဲ့ ဖုနျးတှဟော အခု သုံးလို့ ရနရေငျတောငျ နောကျထပျ လတျောတျောကွာတဲ့အခါ ပကျြစီးတတျပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျး ထှကျလာတဲ့ iPhone တှဟော Waterproof ဆိုတဲ့ ရစေိမျခံနညျးပညာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ iPhone7ကနေ နောကျပိုငျးထှကျတဲ့ ဖုနျးတှဟော ရအေနကျ (၃)မီတာအောကျမှာ မိနဈ(၃၀)အထိ ရစေိမျခံတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တခြို့က ရစေိမျခံမခံကို အလောငျးအစား လုပျတတျကွပါတယျ။ တကယျက အလောငျးအစား လုပျစရာ မလိုပါဘူး။ တကယျတော့ ရစေိမျခံတယျဆိုတာ စံသတျမှတျခကျြသာဖွဈပွီး၊ ဟုတျမဟုတျ စမျးသပျကွညျ့ဖို့ ရညျညှနျးခကျြ မဟုတျပါ။
Water-resistance ကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့အရာတှကေတော့ သတျမှတျထားတဲ့ ရအေနကျထကျ ပိုတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျ ရရေဲ့အပူခြိနျ ခွားနားတဲ့အခါ၊ ရရေဲ့ဖိအားက ကွီးမားတဲ့အခါမြိုးတှမှော water-resistance.ကို လြှော့ကစြနေိုငျတာကိုလညျး သတိထားဖို့ လိုပါတယျ။ Credit